Musharaxiin dalbatey in guddiga xalinta khilaafaadka doorashada Puntland la dhiso [AKHRI]
By Puntland Focus Group
Sida la wada ogyahay waxaa Baarlamaanka (Golaha Wakiiladda) Puntland go'aamiyey 14 Agoosto, 2018, in doorashada Madaxweynaha iyo Ku-xigeenkiisa ay dhacdo 8 Janaayo 2019, iyadoo loo marayo qaabkii hore maadaama ay suurtogeli weydey in ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah 2019ka.
1. Haddaba si doorashada Puntland ee 8 Janaayo, 2019, ay ugu dhacdo jawi wanaagsan, loona helo kalsooni ku wajahan xulitaanka xildhibaanada cusub iyo nidaamka doorashada guud ahaan, waa in dhamaan qeybaha ay khuseyso arintani, sida Dawladda, Musharixiinta kale, Golaha Wakiiladda iyo kan Dhaqanku, wadatashi balaaran ka galaan magacaabista xubnaha Guddiga Xallinta Khilaafaadka Xildhibaanada "Vetting Committee".
Sidaas darteed waxaan soo jeedineynaa:
A. In xubnaha Gudigu noqdaan shaqsiyaad ka madax-bannaan siyaasad iyo koox daneed gaar ah.
B. In Gudigu noqdo xubno bulshada dhexdeeda ku leh magac iyo sharaf, wax boog ahna aan lahayn, laguna qanci karo go'aanka ay gaaraan.
C. Waa inay xubnuhu ku salaysan yihiin, si cadaalad iyo sinaan ah, isla markaasna ka yimaadaan gobolada iyo qaybaha kala duwan ee dadka reer Puntland ka kooban yihiin.
Dr Maxamed Salaad Cali (Qoryooley)
Gaas oo isku tilmaamey Khadar si hoose-na u sheegey musharaxnimadiisa [ DAAWO]
Puntland 27.11.2018. 19:36
Gaas oo markii xilkaan loo doortay Shan sano ka sheegay madashii codka...
Musharax Dani oo ka hadlay ciidamo qabsadey Garoonka diyaardaha Garowe [Dhageyso]
Puntland 03.11.2018. 21:00
Musharax Jabiye oo qado u sameeyey Caruurta Agoonta ee Garowe
Puntland 03.11.2018. 19:34
Guddiga Doorashada KMG Puntland oo Lagu Eedeeyey Ansaxin Ururo
Puntland 05.03.2018. 05:01
PFG oo ka digtay isku day lagu faragelinayo dastuurka Puntland
War Saxaafaded 23.10.2018. 16:02
XOG: Madaxtooyada PL oo amar ku bixisay burburinta xayeysiisyada Musharaxiinta
Puntland 16.10.2018. 22:52
Puntland Focus Group oo u jawaabtay Madaxtooyadda Puntland
War Saxaafaded 01.03.2018. 22:22
PFG oo war kasoo saartey joojinta mashruucii dhismaha wadada XARFO-JALAM
War Saxaafaded 10.09.2018. 17:43